Ciyaartoyga caanka ah ee loo xiray dilka atariisho horay u jecleyd | Xogsame News | Latest News In Africa
Fursad kasta waxay ahayd muhiim, lagamana soo kaban karin inay khasaarto.
Kooxda waxay guul ka gaareen kooxda ay ku xifaaltamaan magaalada Rio de Janeiro ee Fluminense. 2-0 ayey uga badiyeen kulan ka tirsanaa horyaalka Brazil, oo ay ciyaareen galabtii ay taariikhda ku beegneyd 27-kii bishii May, 2010-kii.
Laad xor ah ayaa loo dhigay meel aan ka fogeyn xeyndaabka goolka kooxda kasoo horjeedday, xilli ay ciyaarta mareysay daqiiqaddii 90aad.
Gool hayihii kooxda Flamengo, Bruno Fernandes de Souza ayaa qaatay fursaddaas, wuxuuna dhaliyay gool aad u qurux badan.
Wuxuu ahaa goolkii afaraad ee uu dhaliyay intii uu xirfaddiisa ku guda jiray, isagoo waliba gool haye ah.
Rajo aad u fiican ayaa laga qabay inuu meel sare gaarsiin doono xulka qaranka Brazil, oo ku caan baxay inay soo saaraan ciyaartoyda xirfaddooda cajiibka tahay.
Laakiin hal bil kaddib xilligaas, waxaa isbaddalay guud ahaan mustaqbalkiisii.
Arimaha siyaasadda9 months ago
Arimaha bulshada12 months ago
Arimaha siyaasadda12 months ago
Diinta12 months ago